Rosemary yakakosha mafuta mabhenefiti uye mashandisiro
Rosemary idiki shrub ine maruva akareruka anopa hunhu hunoshamisa. Yakashandurwa muchiRussia, "rosemary" zvinoreva "dova regungwa". Madzitateguru edu akafunga zvakare ichi shrub chiratidzo cherudo uye kuvimbika, kubudirira uye kubudirira.
Properties yeiyo rosemary yakakosha mafuta
Iine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvinobatsira, mafuta anobatsira nezvirwere zvakasiyana siyana: mamota, varicose veins, hypertension, kushomeka kwetsinga dzeropa, kusagadzikana kwekutya, kushaya hope, acne, dambudziko reganda rine mafuta.
Rosemary yakakosha mafuta inovandudza zvakanyanya kunzwa uye kunhuwidza, uye inobatsira kuchengetedza yakakodzera mvura chiyero nekubvisa yakawandisa hunyoro kubva mumuviri.
Zvishandiso zveRosemary yakakosha mafuta
Iyi oiri ine kugona kwakasarudzika kwekutobuditsa epidermis. Ndicho chikonzero nei akawanda anozivikanwa mafekitori e cosmetology mafemu anoishandisa mune hwaro hwezvigadzirwa zvavo.
Iyo ine inobatsira kunobatsira kurapa pakurapa kwekutambanudza mamaki paganda. Sanganisa madonhwe masere erosemary akakosha mafuta ne 8 teaspoon yemafuta emuarumondi uye sanganisa musanganiswa munzvimbo dzinonetsa zuva nezuva. Hakuzovi nekutsvaga kwekutambanudza mavara.
Mafuta anokosha Verbheneni mhando ine maitiro akanaka pane yakaoma uye yakaonda ganda rechiso. Makirimu, masiki uye mafuta anotsamira pairi anonyanya kugadzirisa mamiriro edambudziko reganda, anobatsira kukurumidza kupora kwemavanga uye kubvisa mavara ezera.
Mafuta eRosemary mushonga wakanaka kwazvo webvudzi rakasununguka nemipendero yakatsemuka. Chero mari inoenderana nemafuta akadaro inopa rubatsiro rwunogona pakurapa mhanza yekutanga.
Mhando dzese dzekugezera pamwe nekuwedzeredzwa kweRosemary mafuta anokosha anozivikanwa kwazvo, ane hutano hwakawanda hwekuporesa, uye anonyanya kushanda pakurwadziwa mumhasuru nemajoini.
Mhando dzakasiyana dzemassage dzinogadzirwa, dzinosanganisira kwete chete rosemary mafuta, asiwo rosehip uye apricot base mafuta, pichisi uye cocoa oiri.
Oiri iyi inosimudzira kupora kwekutsva. Kuti uite izvi, unofanirwa kugadzirira yakakosha compress: 6 madonhwe emafuta anofanirwa kudonhedzwa mumudziyo nemvura inopisa, ipapo jira nyoro rakanyoroveswa mune yakadaro mvura rinofanira kuiswa panzvimbo inorwadza.
Mafuta eRosemary anoshanda zvakanyanya mukukuvara kwemitambo, pamwe nenyaya yekuneta kwemaziso kune vanhu vanoshanda zuva rese pakombuta.
Kudziya neiri inovava tinge yemafuta aya kunobatsira kutarisa usati waita sarudzo dzakakomba mune chero mamiriro ehupenyu.
Unhu hwakadai hunongori mushonga wepasirese wenguva dzose, uyo unofanirwa kuchengetwa mumba uye ugone kuushandisa nemazvo.
Rosemary yakakosha mafuta ebvudzi
Humwe hunhu hwakanaka hwemafuta anoshamisa aya mhedzisiro yayo pane bvudzi nemusoro. Inobvisa uye inodzivirira kudzika, inosimudzira bvudzi kukura, inomisa kurasikirwa kwebvudzi, uye kunyangwe kucheresa ganda romusoro.
Kune akakura akasiyana siyana mabikirwo ebvudzi uye emusoro masiki. Kana bvudzi rako risina kusimba uye richida kusimbiswa nekudya, saka gadzira chifukidzo: sanganisa 1 donhedza rimwe nerimwe rebasil, mhiripiri nhema, rosemary uye madonhwe maviri eYlang-ylang mafuta. Wedzera chidiki chemunyu uye 2 yolks kumusanganiswa. Chengetedza maski kwemaminitsi makumi matatu. Iwe unogona zvakare kushandisa uyu musanganiswa pachinzvimbo cheshampoo - zvakare ine yekuchenesa maitiro.
Kana iwe uchiri mutsva pakushandisa akakosha maoiri, saka unofanirwa kutanga neinotevera: Usati waomesa, isa donhwe rimwe rosemary rinokosha mafuta pamuti wehuni. Kukwesha kwakadai hakungosimbise bvudzi rako chete, asi zvakare kunobatsira iwe kuti uve wakasvinura uye ujekese pfungwa dzako.
Uye kana iwe uchida kusangove nebvudzi rakanaka chete, asi zvakare rinotaridzika kutaridzika - shandisa eyelash kukura chigadzirwa uye maziso ako anotaridzika akanaka!
Nzira yekubika sei rukato kwebvudzi?
Mishonga yeRosemary uye zvinopesana
Jasmine, yakakosha mafuta: zvivakwa, shandiso, ongororo
Rosemary mafuta: chikumbiro, wongororo
Eucalyptus yakakosha mafuta: zvivakwa uye mashandisiro
Posted in utano uye mishonga
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,441 masekondi.